लगभग 50 वर्ष को उमेर मा, हरेक महिला शरीर यसको प्रजनन समारोह पूरा भएपछि रजोनिवृत्ति, मार्फत जान्छ। यो अवधि लामो समय को लागि पछिल्लो सक्छ - दस वर्ष सम्म। महिला सजिलै र चुपचाप बित्दै लागि यस्तो पुनर्गठन धेरै दुर्लभ छ। धेरै बारम्बार गंभीर लक्षण यो अवधिको विशेषता: मनोवैज्ञानिक राम्ररी गर्दा अनि शारीरिक रोगहरु को worsening। अवस्था कम र जीवन वैज्ञानिकहरू दबाइ गुणस्तर सुधार गर्न "Besser Alter" विकास भएको थियो। यसको कार्य को समीक्षा अवस्थामा जहाँ बिरामीको उपयोग गर्नु भन्दा पहिले विस्तृत परामर्श पूर्व-प्राप्त र कडाई सिफारिसहरू पालन गर्ने प्रयास मा सकारात्मक छन्।
सबै भन्दा राम्रो उमेर
औषधि नाम "सबै भन्दा राम्रो उमेर" को रूपमा अनुवाद। जर्मन फ्रेडरिक Gebler - - यो अवधिमा Altai महिलाहरु वर्णन यो कसरी यसको निर्माता छ। को Altai क्षेत्र को प्रकृति , आफ्नो जडीबुटी र परम्परागत चिकित्सा को शताब्दीयौंदेखि पुरानो इतिहास संग महिलाहरु कुनै पनि उमेर मा आकर्षक रहने मदत विचित्रताहरू काम गर्दछ। सबैभन्दा उपयोगी र मूल्यवान दबाइ, "Besser Alter", जो ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा को सबै संयोजन र अब रूसी बजार मा देखा छ। निर्माता अनुसार, लागूपदार्थ कारण अब हरेक महिला जीवन वही मुसीबत कुरा जस्तै देखिन्थ्यो अघि जब आनन्द उठाउन सक्छौं। हर्मोन परिवर्तन यसलाई परिवार र साथीहरूको साथ सम्बन्ध कायम गर्न कठिन थियो, मुड प्रभावित, ज्वार कार्यस्थल, ऐंठन र अनियमित चक्र hampered योजना मा सहज महसुस गर्न अनुमति छैन। यो प्रत्येक मार्फत थियो, तर अब राज्य एकदम "Besser Alter" लिएर सुधार गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै छन् हुनत संसारभरि विरामीहरु हजारौं भन्दा समीक्षा, यो प्रमाणित र दबाइ फिट गर्ने होइन ती।
दबाइ को संरचना र कार्य
दबाइ को दिल मा जडीबुटी र यौगिकों को टाढा विगतमा ज्ञात को प्राकृतिक गुण हो। महिला चक्र लागि जिम्मेवार हर्मोन - दबाइ toxins को यो शुद्धीकरण र सुरु प्रक्रिया oestradiol, महिला ovary मा कार्य। कपडे जस्तै घटक टनीन coniferin रूपमा जिम्मेवार तयारी र ओक छाल निकाल्ने र turpentine, दबाइ lichen देखि lichen एसिड प्राप्त सफाई को लागि ursolic एसिड Rhododendron र खराब देखि। शुद्धीकरण डिम्बाशय ऊतक digestible भिटामिन र खनिज संतृप्त। तिनीहरूले goji जामुन, ब्लूबेरी, देवदार तेल र आउन पत्थर तेल, दबाइ को भाग हो। प्रयोग estradiol bioflavonoids राल साइबेरियन मेपल Bergenia, को उत्तेजना लागि shiitake मशरूम, Cantarella र Reishi। औषधि "Besser Alter", जसको संरचना यति विविध, नारी शरीर मा जटिल प्रभाव छ नरमररुपले रजोनिवृत्ति मार्फत जान मदत। प्राकृतिक संरचना, कुनै कृत्रिम हर्मोन यसलाई विभिन्न रोगहरु प्रयोगको लागि सुरक्षित बनाउन।
"Besser Alter": प्रयोगको लागि निर्देशन
दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशनहरू व्यक्तिगत र यसलाई स्थित छ जो मा बिन्दु मा निर्भर गर्दछ। premenopause समयमा, जब सबै लक्षण बस थालेका छन्, कार्य "Besser Altera 'धेरै सजिलै देखिने, पनि कम औषधिको खुराक र छोटो मार्ग मा। यसबाहेक, रजोनिवृत्ति र पोस्ट-रजोनिवृत्ति समयमा, पाठ्यक्रम र औषधिको खुराक वृद्धि हुनुपर्छ। यो गर्न, त्यहाँ पनि अधिक "Besser Alter Ausgaren" भनिन्छ फारम प्रबलित छ। यो Altai Highlands मा Biisk शहर मा उत्पादन गरिएको छ। यो दबाइ लिएर, महिला लगभग तुरुन्त सुधार नोटिस बताए छ, तर निर्माताहरू अर्डर पूर्ण सफा गर्न शरीर मा, 1-2 महिनामा पाठ्यक्रम जारी सिफारिस र यसलाई आफ्नै एस्ट्रोजन विकास प्रक्रिया सुरु भएको छ। विशेषज्ञहरु को विस्तृत परामर्श, दबाइ, "Besser Alter", प्रयोगको लागि निर्देशन, दबाइ प्रतिक्रियाहरू बारे व्यक्तिगत dosages को चयन - यो सबै सँगै रजोनिवृत्ति को manifestations लड्न आफ्नो व्यक्तिगत समाधान ठ्याक्कै निर्धारण मा मदत गर्नेछ।
ज्यादातर देखि समीक्षा, को चिकित्सा बारेमा सकारात्मक छन् ठूलो विस्तार उपचार पूरा गरेका "Besser Alter" महिला त्यो मार्क को प्रभाव। विरामीहरु premenopause र रजोनिवृत्ति को अवधि थिए जो समीक्षा, उत्कृष्ट सकिन्छ। महिला सबै बहाल वा libido सुधार, दुखाइ, छाला र कपाल को सुधार को अभाव उल्लेख गरे। लगभग दस मा एक menstrual चक्रको बहाली थियो। साधनहरुलाई सामान्यकृत ग्लाइसेमिक नियन्त्रण लागू मा, atherosclerosis र हड्डीको घनत्व को क्रमिक रिकभरी खुलारूपमा घटाउनुहोस्। उपचार समयमा दबाइ को निर्माताहरू एक अनियोजित अवधारणा को संभावना बारे चेतावनी र गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
"Besser Alter": डाक्टर को समीक्षा
रजोनिवृत्ति समयमा, धेरै महिला अप्रिय लक्षण को उन्मूलन मा विशेषज्ञहरु संग सल्लाह लिनुहोस्। Advantageously चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् हर्मोन प्रतिस्थापन उपचार। यो अक्सर राम्ररी नियुक्त हर्मोन बढी समस्या निम्त्याउँछ कि यस्तो छ। तयारीको "Besser Alter" केही थाह मा, त्यसैले केही डाक्टर आफ्नो विरामीहरु यो सल्लाह दिन्छन्। लगभग कहिल्यै ह्यान्डल गर्ने गर्दा स्त्रीरोग विशेषज्ञ यसलाई अज्ञात छ को किनभने यसको अस्तित्व र संरचना को यो सिफारिस गर्दैन। तदनुसार, डाक्टर को "Besser Alter 'को समीक्षा को तयारी पाउन कठिन छ। केहि फेला परेन प्रतिक्रियाहरू gynecologists एक आहार पूरक रूपमा यो कुरा जो ती छुट्याउन सक्नुहुन्छ बीच, रजोनिवृत्ति समयमा शरीरमा कुनै पनि गम्भीर प्रभाव छ देखिँदैन। एक ठूलो संग उद्देश्य परिणाम नमूना आकार अझै। कृत्रिम हर्मोन को नियुक्ति गर्न परम्परागत दृष्टिकोण रूसी चिकित्सा प्रबल होना। एक दबाइ छनौट गर्दा "Besser Alter" ग्राहक समीक्षा थप विश्वास गर्न सकिने छन्।
1840 मा जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक अगस्ट Gebler को Altai क्षेत्र nationalities जीवन अध्ययन र विशेष लामो-बस्ने ध्यान आकर्षित। आवश्यक सामाग्री प्राप्त भएको उहाँले "Besser Alter" यो कल, परंपरागत को आदिवासी मान्छे प्रयोग गरेको प्राकृतिक पदार्थ को एक जटिल भेला, र आफ्नो सूत्र ल्याए। यो Altay महिला र चिकित्सकहरु बारेमा प्रतिक्रियाहरू उत्कृष्ट समयमा गरिएको छ। त्यसपछि, यो सूत्र को प्रभावकारिता बारम्बार सोभियत र युरोपेली वैज्ञानिकहरू द्वारा साबित भएको छ। सूत्र, व्युत्पन्न Gebler यसलाई व्यापक युवा लम्ब्याउनु प्राकृतिक र सुरक्षित तरिका को अध्ययन मा अमेरिकामा प्रयोग गरिएको छ। र परिणाम स्वास्थ्य समस्या को सुधार को तथाकथित लक्षित विधिहरू आधार थियो। 2012 देखि, दबाइ रूस मा उत्पादन गर्न थाले। सुरुमा कारखाना उपनगरहरुमा स्थित थियो, तर एक वर्ष पछि त्यो Biisk शहर मा, Altai सारियो। त्यसैले, लामो समय को लागि दबाइ को तैयार 100 वर्ष बितिसकेको छ।
विरामीहरु को समीक्षा
"Besser Alter" रोगी प्रशंसापत्र के हुन्छ? सकारात्मक र नकारात्मक दुवै। संग शरीर मा दबाइ प्रदान सकारात्मक प्रभाव सम्बन्धित छन्, र नकारात्मक अविश्वास व्यक्त गरे। धेरै मानिसहरू यो मुद्रा को लागि अर्को छोडपत्र छ, र वास्तव मा दबाइ कुनै प्रभाव छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। यो सुविधा फिट गर्ने होइन ती बाट केही नकारात्मक समीक्षा हो। यस्तो अवस्थामा, महिला दबाइ इच्छित प्रभाव उत्पादन भएन भनेर गुनासो। तर यो यस्तो स्वास्थ्य वा वजन को तीव्र गिरावट रूपमा नकारात्मक पक्षहरू, महिला "Besser Alter" लिए गर्दा उल्लेख थिए टिप्पण लायक छ। संयोजन मा दबाइ को समीक्षा सही तस्वीर तथापि, निष्कर्षमा यो भन्दा फिट गर्न सकिन्छ दिन छैन।
निर्माता कुनै analogues छ कि एक माध्यम रूपमा आफ्नो उत्पादन स्थिति छन्। साँच्चै, जडीबुटी र सक्रिय सामाग्री को एक यस्तो सेट कहिल्यै प्ले। तथापि, phytoestrogens अझै रूसी बजार मा प्रतिनिधित्व। एक यस्तो दबाइ "Estrovel" छ। यो लामो समय अवस्थित छ यो gynecologists गर्न सिफारिस गरिएको छ, र एक महिला, आफ्नो निर्णय रजोनिवृत्ति को उपचार मा सकारात्मक परिणाम छ। साथै, कृष्णपक्ष प्रजनन समारोह लोकप्रिय लागूपदार्थ "ची-Klim" र "Tsiklogenon", कुन पनि बिरुवाबाट उत्पन्न "Besser Alter" दबाइ जस्तै पदार्थ को आधार गठन। यो संरचना र आवेदन निर्देशन कुनै पनि formulary उपलब्ध छन्। डाक्टर तपाईं आत्म-medicate गर्न, रजोनिवृत्ति को लक्षण "तिर्नको", र जसले एक पर्याप्त व्यक्तिगत उपचार को विश्लेषण को आधार मा चयन गर्नेछ एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ, भ्रमण आवश्यक गर्दा रजोनिवृत्ति को अवस्थामा सुझाव।
रजोनिवृत्ति को लक्षण
सामान्यतया, रजोनिवृत्ति मा उमेर 48 वर्ष (प्लस वा माइनस3वर्ष) वरिपरि सुरु हुन्छ। तर यो हुन्छ, र महिला 35 वर्ष पछि, धेरै पहिले रजोनिवृत्ति लक्षण अनुभव होस्। यो प्रतिकूल वातावरणीय अवस्था र अस्वस्थ जीवन शैली कारण हो। तपाईं कुनै पनि अचानक अल्पकालीन तापमान वृद्धि वा बन्न अस्थिर चक्र छ भने, डाक्टर एक यात्रा मा पुल छैन र यस्तो "Besser Alter" को रूपमा आत्म-नियुक्त एजेन्ट, पनि सुरक्षित र प्राकृतिक, मा संलग्न। उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू सबैभन्दा भाग र लागि सकारात्मक छन्, तर तपाईं यो दृष्टिकोण छैन भन्ने सम्भावना सधैं त्यहाँ छ।
दबाइ "Besser Alter", उहाँको बारेमा वास्तविक महिला, साथै उपस्थित चिकित्सकहरु को सिफारिस छलफल भएको, यो यसको प्रभावकारिता बारे निश्चित निष्कर्षमा बनाउन गाह्रो छ। नयाँ, मिश्रित समीक्षा, यो हाल रूसी महिला माझ लोकप्रियता प्राप्त छैन, गरिबी अध्ययन। युरोपेली महिला बीच, यो धेरै साधारण छ भने, निर्माता रूस लागि, को आश्वासन सम्म उत्पादन रूपमा स्पष्ट छ, र यसको मूल्य - संदिग्ध छ।
आज हामी inhalers बाँचिरहेको संसार बच्चाहरु लगभग हरेक घर आवश्यक!
गर्भवती इष्टतम प्रयोगको लागि के नाक खस्छ
"Tsitralgin" क्रीम: निर्देशन, analogs र समीक्षा
चिकित्सा 'Imunoriks'। समीक्षा। सङ्केत गर्छ। निर्देशन
दबाइ 'Klirvin'। समीक्षा। विवरण। आवेदन
Antihypertensive चक्की "Bloktran": प्रयोगको लागि निर्देशन
अत्तर "साना काला पोशाक" - पाँच स्त्रीत्व विकल्पहरू
गाजर र छडी विधि: जीवन विभिन्न क्षेत्रमा यो कसरी प्रयोग गर्ने?
कसरी ध्रुवीय भालु सुन्दर आकर्षित गर्न?
ड्राइभ लागि चालक फेला पार्न सकिएन। जहाँ एक चालक ड्राइव फेला पार्न? ड्राइभ स्थापना
किनभने के को कम्प्युटर झुन्डिएको छ र कसरी यो मामला मा अगाडि बढ्न?
बार्सिलोना किन स्पेन दोस्रो राजधानी मानिन्छ? बार्सिलोना मा एक घर भाडामा र त्यहाँ बस्न - फेला सबै भन्दा राम्रो तरिका बाहिर।
नगरपालिका-निजी साझेदारी: सम्झौता को परिभाषा, व्यवस्था
एल्बम Linkin पार्क: आश्चर्यजनक प्रयोग को 15 वर्ष
कोर्फू हवाई अड्डा: उपयोगी जानकारी
केक लागि fillings: स्वाद को एक किसिम
आपराधिक व्यवस्था - विधिशास्त्र को एक प्रमुख शाखा
मनोविज्ञान - यो के हो? आधारभूत कार्यहरु र मनोविज्ञान को प्रकार